Ahoana ny fomba fanaovana sary voninkazo tsara tarehy amin'ny dingana telo raha ny filazan'ity mpanakanto Koreana ity | Famoronana an-tserasera
El manana izany ny sary ny voninkazo ireo, fa raha mampianatra anao izy ireo hanaraka dingana vitsivitsy hahafahana mandoko azy ireo, dia mihatsara kokoa. Ity no ataon'ity mpanakanto Koreana ity izay maka ny pensilihazo sy ny borosiny mba hampisehoana ny dingana hataony hisarihana ireo voninkazo tsara tarehy ireo.
Fomba iray hanatsarana ny fahaiza-manao pensilihazo sy borosy hanombohana maka ny natiora amin'ny valizy samihafa na amin'ny ravina voaomana ho an'ny loko rano. izany mpanakanto dia Kate Kyehyun Park Ary, ankoatry ny fanta-daza amin'ny sary manao zaridaina botanika dia maniry hampianatra izy ary ho an'ny hafa hahatratra ny valiny mitovy aminy.
Ao amin'ny pejy Instagram an'ny Kate Kyehyun Park dia afaka mahita andiana sary sy voninkazo vita amin'ny faran'izay tsara, ary koa iray tsara andiana fampianarana izay mampianatra ny dingana tsirairay Izay tsy maintsy omenao mba hamaranana ny fandokoana ireo voninkazo mahafinaritra sy marefo ireo.
Miresaka momba izay azonao ianarana izahay raozy loko, tulips na cacti, ankoatry ny andiam-boninkazo hafa isan-karazany. Ny tena marina dia marefo be ny tadiny ary hainy ny manome ny fikasihan-tànana mety hisamborana izany voninkazo izany izay toa hianjera ny felany noho ny herin'ny rivotra; toa an'ity artista ity sy ireo kapoka borosy matevina handokoana vorona.
Ny tsara indrindra amin'izy rehetra ny tutorial-ny dia tena tsotra sy mazava tsy misy fisafotofotoana be. Izy ireo dia misy dingana telo ilainao harahina mba hanoratanao sary izay tianao. Ny sary an-tsary voalohany izay nanintona ny endrika, avy eo ny tsipika miampita sy ny sary farany miaraka amin'ny endrika felam-boninkazo mba hamoronana sary hoso-doko sy sary ny voninkazo.
Mandao anao izahay miaraka amin'ny Instagram so it araho izy ary fantaro akaiky izy ny lohateninao tsirairay avy dia vonona amin'ity tambajotra sosialy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mampianatra tsikelikely ny fomba fanaovana sary voninkazo tsara tarehy ny mpanakanto koreana
Fanampiana lehibe tokoa ho an'ireo izay, toa ahy, tsy mahalala ny fanaovana sary!
Tatiana Velasquez dia hoy izy:
Misaotra anao nampianatra anay tsikelikely, ny fomba hianarana sary, tsy haiko ny manao sary fa miaraka amin'ireto fampianarana ireto dia fantatro fa hahatratra azy aho
Mamaly an'i tatiana velasquez
Tsisy fisaorana! Arahaba :)
Ny endritsoratra maimaimpoana an'ny IKEA no endrika mampahazo aina indrindra noforonina